Beesha Xawaadle oo sheegtay in Kalsoonidii kala noqdeen Dowlada Federaalka Soomaaliya & xildhibaan Max’ed Xasan Qoone oo arintaas ku taageeray Beesha – idalenews.com
Kulan xasaasi ah oo maanta ay ku yeesheen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, siyaasiyiinta, aqoonyahannada, saraakiisha ciidamada, waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ka soo jeeda beesha Xawaadle ayaa laga sheegay in beesha kalsoonidii kala noqtay dowladda federaalka Soomaaliya, iyaga oo eedeyn balaaran u jeediyay wasiirrka wasaarrada arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka xukuumada Soomaaliya C/kariiin Xusseen Guuleed.
Kulanka oo gabagabadiisii laga soo saaray bayaan loo qebiyay warbaahinta ayaa u dhignaa sidan:
Sidaa daraadeed markii aan aragnay tacadiyada dowladda federaalka gaar ahaan wasiirrka wasaarrada arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka uu ka wado gobollka Hiiraan, waxaan go’aansanay qodobada soo socda :
2. beesha Xawaalle fidisay gogol lagu dhisayo maamul gobol oo cadaalad ku dhisan, ayna ka soo qeyb-gallayaan dhamaan beellaha ku dhaqan gobolka.
5. Iyo ugu danbeytii in dhaqaallaha laga qaado dhamaan deegaannada ay degan tahay beesha lagu soo wareejin doono guddi dhaqaalle oo arintaa loo saaray, halkii markii hore ay ku xaroon jirtay Qasnada maamulka dowladda ee gobolka Hiiraan, si loogu daryeello ciidamada.
Odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta, waxgaradka, aqooyahannada iyo saraakiisha ciidamada kulanka ka qeyb-gallay, ayaa sheegay in arintan ay la socod siinayaan ogeysiisna ka siin doonaan isla maanta saraakiisha ciidamada Jabuuti ee AMISOM iyo kuwa Itoobiya, iyaga oo ku war-gallinaya in laga bilaabo maanta ciidamada beesha aysan dowladda federaalka ka mid aheyn.
Nabadoon Max’ed Cabdi Raaxooy oo ka hadllay kulanka ayaa arin nasiib darro ah ku tilmaamay in wasiirrka arrimaha gudaha uu dhagaha ka fureystay tallooyin faro badan oo sida uu hadalka u dhigay u jeediyeen waxgaradka, odayaasha iyo siyaasiyiinta beesha, isaga oo taan ka doorbiday ayuu sheegay in uu dhibaato ka dhax abuuro beellaha wada dega gobolka Hiiraan.
Nabaddoon Faarax Cabdi Waare oo isagana sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ku dhisan tahay dastuur, sidaa daraadeed iyaga oo taa taxi-raacaya dhawaan fidin doonaan gogol lagu dhisayo maamul gobolleed cadaalad ku dhisan.
”Dowladda iyada ayaa ku tumatay sharciga, dastuurka,mana aqbaleyno in dhibaato iyo colaad gobolka laga abuuro, annaga oo odayaashii dhaqanka gobollka ah ayaa arintaa u taagan in aan ka hor tagno, fariintan waxaa toos ugu dubineynaa madaxda sare ee dowladda, waxaan leenahay beeshu waa ay tashatay, sidaa daraadeed dowlad aan aqoonsannahay ma jirto,” ayuu yiri Faarax Cabdi Waare.
Dhiacyadii ka qeyb-gallay kulanka dhamaantood oo ay HOL la hadashay waxaa ay sheeegeen in arintan ay mudo dheer ka fikirayeen, laakiin ugu danbeytii qaateen go’aankan kadib markii ogaadeen waxa ka dhalan kara sida wasaarrada arrimaha gudaha u maareysay dhismaha maamulka gobolka.
Dhinaca kale, xildhibaan Max’ed Xassan Ibraahim Qoono oo intii uu kulanka socday la soo xiriiray HOL waxaa uu sheegay in uu ku raacsan yahay odayaasha dhaqanka beesha go’aanka ay ka qaateen dowladda federaalka Soomaaliya.
Masar oo u yeeratey Safiirkeedii ka fadhiyey Itoobiya “Waa Maxayse Sababtu”